सरकारको आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट सुरु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सरकारको आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट सुरु
बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १४:११ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। सरकारले सबै खालका सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सुरु गरेको छ। बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्।
त्यस अवसरमा उनले आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउन सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट सुरु गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले अव छिट्टै राजस्व संकलनको सबै काम यही प्रणालीबाट सुरु हुने घोषणा पनि गरे।
उनले विद्युतीय प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्न आवश्यक कानून, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणको काममा ढिलाई नहुने दाबी गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीबाट सुरु गरिएको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
यो सेवा केन्द्र बुधबार करदाता सेवा केन्द्र ठमेलबाट आरम्भ गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष भित्र देशभर यो सेवालाई विस्तार गर्ने योजना बनाइएको राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले जानकारी दिए।
PREVIOUS POST Previous post: दैनिक अदुवा खानुका ८ फाइदा,पुरा पढ्नु होस
NEXT POST Next post: ग्यास बुलेट दमौली मा दुर्घटना ,ग्यास पड्कन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी अहिले सुरक्षाकर्मी तैनाथ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १४:११
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १४:११
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १४:११
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १४:११
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, बैशाख १२, २०७५ १४:११